ယောဘသည်လျှောက်လွှာယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေးပေးစာရေးထားလုပ်နည်း Email 🥇
မေလ 1, 2018
မေလ 6, 2018
ယောဘသည်လျှောက်လွှာအီးမေးလ်က ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုသိတယ်။ The ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ဘယ်လောက်ကောင်းတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းရေးသားဖို့။ စုဆောင်းရေးမန်နေဂျာကိုပထမဦးဆုံးလျှောက်လွှာအီးမေးလ်ကစာတစ်စောင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်မတိုင်မီကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအမြဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌လက်ပေးခြင်း ဘယ်လိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ သင်တို့သည်လည်းကြည့်ရှိသင့် တစ်ဖုံးစာကိုများအတွက် Forbes မဂ္ဂဇင်းလမ်းညွှန်.
အောင်မြင်တဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာစာတစ်စောင်ရေးသား။ အတိအကျ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအတွက်၎င်း၏တစ်ဦးဂိမ်း changer။ အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်ကာတာနိုင်ငံနှင့်အတူ ဆော်ဒီအာရေဗျ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအလုပ်လျှောက်လွှာအီးမေးလ်ကအနိုင်ရတဲ့ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို "အကြောင်းကိုအသေးစိတ်လမ်းညွှန်ရေးသားခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးနေသည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးနောက် အပြုသဘောလမ်းညွှန်, သင်ကနည်းမှန်လမ်းမှန်ထဲမှာလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိသင့်ပါတယ်။ အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်ရှာဖွေသူကြောင့်အံ့သြဖွယ်အဖုံးစာတစ်စောင်ရှိသည်ဖို့တစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်.
အလုပ်လျှောက်လွှာအီးမေးလ်နှင့် ဒူဘိုင်းတက္ကသိုလ်ကနေဖုံးစာတစ်စောင် သင်တို့အဘို့အတန်ဖိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျပညာရှင်များကပံ့ပိုးနည်းဥပဒေကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်, သင်သည်စနစ်တကျလမ်းထဲတွင်စီမံခန့်ခွဲပုံကိုမသိကြပါလိမ့်မယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်သင့်လျော်သောဒူဘိုင်းလမ်း.
တစ်ဦးကအလုပ်စာတစ်စောင်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများများအတွက်အရေးအပါဆုံးလမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးအလုပ်လျှောက်လွှာမှာရှာကြ၏။ ထိုအခါ အဆိုပါစုဆောင်းမှုအေးဂျင့် တစ်ဦး updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရှာဖွေနေ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လူတွေတစ်ဖုံးစာကိုအတူသတင်းအချက်အလက် updated မဟုတ်ပေးပို့ခြင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီအလုပ်လျှောက်လွှာစာရွက်စာတမ်းနှင့် CV ကိုနှင့်အတူပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အလုပ်လျှောက်လွှာ၏ရည်ရွယ်ချက် အဆိုပါဖြတ်လမ်းများကိုဖြစ်ပါသည် အသေးစိတ်အလုပ်အတွေ့အကြုံသတင်းအချက်အလက်များအတွက်.
အလုပ်ရှာဖွေသူများ အကောင်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့််ထမ်းရှာဖွေသူတစ်ဦးအမြန်နှင့်ရိုးရှင်းသောထုံးစံ၌သင်၏အတှေ့အကွုံမြားမှာကြည့်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးရှိ Bayt.com နှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်အဖုံးစာတစ်စောင်ကိုကြည့်။ အလုပ်ရှာဖွေရေးမုဆိုးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်အထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်အအခန်းကဏ္ဍကို၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားပြောင်းထူးခြားတဲ့လမ်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စော်ဘွားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်.
အလုပ်လျှောက်လွှာပေးပို့ခြင်းအလွန်အရေးကြီးသည် အလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးလေယာဉ်ဆင်းသက်များအတွက်။ ယနေ့ခေတ်အလုပ်ရှင်များကအများစုသူတို့ကိုကူညီပေးသည်သော application စာတစ်စောင်တောင်း အလုပ်ရှာဖွေသူများဆန်ခါတင်စာရင်းပေးရန် နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးခေါ်ဆိုမှု။ အလုပ်တစ်ခုစာတစ်စောင်ရေးသားဖို့ကိုဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမပြုမီရဲ့တစ် CV ကိုကနေကွဲပြားခြားနားသည်ကိုမည်သို့ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ သတိရ မျက်နှာဖုံးစာတစ်စောင် အောင်မြင်မှုရန်သင့်လက်မှတ်ဖြစ်ရပါမည်။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်သမိုင်း၏အသေးစိတ်မီးမောင်းထိုးပြအာရုံစိုက်။ သင့်ရဲ့ကျောင်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ် တိကျတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရည်အချင်းများ။ အလုပ်လျှောက်လွှာစာကိုအဓိကအားဖြင့်သင့်အကြောင်းအရာခပ်သိမ်းကရှင်းပြသည်။ အထူးသဖြင့်လာသောအခါသင်၏လျှောက်လွှာ အဆိုပါငှားရမ်းမန်နေဂျာစားပွဲခုံရောက်ရှိ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုစုဆောင်းဖို့က post အခါတိုင်းစကားပြော။ သင်တစ်ဦးအလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းလုပ်သင့်တယ် အသစ်ကလွတ်ဖွင့်လှစ်.
ယောဘသည်လျှောက်လွှာကလည်းအလုပ်ရှင်များတစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်။ သင်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်း အလုပ်အဖွင့်ကိုစိတ်ဝင်စား။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကျဉ်းချုပ်တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းအက္ခရာအဖြစ်ဖန်ဆင်းရပါမည်။ ဒီနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သောကြောင့်, သင်မည်သို့အလုပ်လစ်လပ်သောနေရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ အရှေ့အလယ်ပိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထဲမှာလုပ်ရပါမည်။ အဆိုပါစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာအများစုအင်္ဂလိပ်စပီကာများမှာကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီအသေးစိတ် CV ကိုနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာအီးမေးလ်ကပြီးပြီလား
သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေသူလျှောက်လွှာစနစ်ကအကြောင်းအများကြီးကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်အဖြစ်။ အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျော်၏အလငျး၌။ အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး တကယ်အစက်မရှိသော CV ကို + ဖုံးအက္ခရာများပြင်ဆင်နေ။ ထိုအချိန်တွင် application ကိုစာတစ်စောင် ငှားရမ်းမန်နေဂျာများအတွက် တစ်ခုချင်းစီကိုလျှောက်လွှာများအတွက်အထူးပြုသောအမှုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ, သငျသညျအများအပြားသော့ချက်အချက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်တစ်ခုချင်းစီကိုလျှောက်လွှာအပေါ် s ကို။
သငျသညျအလုပျဖျောပွခကျြတွေ့ဆုံရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းသလား?. ငှားရမ်းအများစုဟာ မန်နေဂျာများ အစား CVs ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မှတဆင့်သွား၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်အကိုင်အများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာဖွေနေ။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေးဂျင့် အကောင်းဆုံးကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများစီစစ်ရသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဖြစ်မကြာမီသူတို့လုပ်နိုင်အဖြစ်, စကားပြော။ အဆိုပါ application ကိုအက္ခရာများအဆိုပါလျှင်အတည်ပြုရန်တစ်ဦးအမြန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရင်းအမြစ်များမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစံငှားရမ်းနှင့်တွေ့ဆုံ။ တဖန်အလုပ်ရှာဖွေသူများတစ်ဦးအခန်းအလွတ်ဖွင့်ပွဲများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
သေချာအောင်လုပ်ပါ သငျသညျအလုပျဖျောပွခကျြတွေ့ဆုံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ငှားရမ်းမန်နေဂျာသူတို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးခြင်းမပြုမီစနစ်တကျကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေလို့ပဲ။ သငျသညျအသီးအသီးအလုပ်လျှောက်ထားနေစဉ်။ သင်လျှောက်ထားနေသောအခန်းအလွတ်ဘို့အတွက်လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်သေချာဖြစ်ရမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအလားတူကုမ္ပဏီအတွက်လျှောက်ထားလျှင်။ သင်တစ်ဦးရှိသည်လိမ့်မယ် အိန္ဒိယတွင်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှပိုအခွင့်အလမ်း.
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရေးအပါဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးပါ ?. သင်သည်အဘယ်သို့အခြားသူများထံမှထွက်မတ်တပ်ရပ်စေသည် ?. ယေဘုယျအားဖြင့်မန်နေဂျာငှားရမ်းရန်, အသစ်သောအလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာအက္ခရာများစကားပြော။ တိုင်းဖွင့်မည် အလားအလာရှာဖွေစုဆောင်းရောက်ရှိဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, သငျသညျဥပမာ, အခြားသူများနှင့်အတူသင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှိုင်းယှဉ်သင့်တယ်, MBA ဘွဲ့ရအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေသူ။ ဒါပေမယ့်သင်ကအလားအလာ HR မန်နေဂျာများရောက်ရှိရန်ကူညီအသေးစိတ်ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ပဏာမတဲ့အဘို့သင့်အလားအလာလျှောက်လွှာ အောင်မြင်သောဖြစ်သင့်သည်။
ကောင်းပြီ, ဒီအဘို့ကိုသာအဖြေဖြစ်တယ်: သင်ရပါမည် အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ဒါကကျိန်းသေတစ်ခုတည်းသော အလုပ်တစ်ခုရတဲ့ဖို့လမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တစ်ဦးရှည်လျားသောအလုပ်လုပ်သမိုင်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုယူလျှင်။ သူကားအဘယ်သူသည်အနည်းဆုံး5နှစ်ပေါင်းအလုပ်တစ်ခုရှိတယ် ?. ဒါကကျိန်းသေစုဆောင်းမှုမန်နေဂျာများ၏အာရုံကိုဖမ်းမယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ အတှေ့အကွုံရှိခြင်း၏ 10 နှစ်ကျော်နှင့်အတူ အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရတဲ့၏ပိုမိုမြန်ဆန်လမ်း။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, MBA ဘွဲ့ရအတွေ့အကြုံနှင့်အတူလောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရလူတွေကျိန်းသေခက်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေးဂျင့်များအရအခြားသောနည်းလမ်းထိပ်ဆုံး rated ကိုးကားအက္ခရာများရှိခြင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကဖြစ်ပါသည် HR မန်နေဂျာများရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းပြီးမှကောင်းသောလမ်း။ ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, သင့်အလုပ်မြဲစေရန်ဖြစ်ပါသည် အလားအလာငှားရမ်းမန်နေဂျာ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကြောင့်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုသင်၏ CV တစ်ခုကိုမန်နေဂျာ၏ ays အတွက်လုံလောက်အောင်ကောင်းသောကိုကြည့်ရပေမည်။ ဒါ့အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်းအဆိုပါစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ။ အဖြစ်အစာရှောင်ကိုသူတို့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်အလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများထားပါ ဒူဘိုင်းအတွက်အလားအလာလွတ်ဘို့။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ဂုဏ်နသောသူကိုခန့်မှန်း ?. အဆိုပါနည်းပါးလာလစာကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်သူ !. ဒါကြောင့်လျှို့ဝှက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလျော့နည်း သင်တစ်ဦးအလုပ်ရရှိမည်အမြန်ဆုံးယူပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလျှောက်လွှာ နေရာလွတ်တစ်ခုစီအတွက်လျှောက်ထားသည်။ လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည့်နိဒါန်းစာဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သင့်သည်။ နှင့်သေချာဘို့သင့်ပါတယ် ရာထူးသို့မဟုတ်အလုပ်အခန်းကဏ္ဍဖော်ပြထားခြင်း လျှောက်ထားပြီးအလွန်တိကျတဲ့ဖြစ်ခံရ။ ယောဘသည်လျှောက်လွှာအီးမေးလ်ကစာတစ်စောင်, နာမတော်ဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နေတဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတူစတင်လက်ခံသူ၏အမညျကိုသင်သိလျှင်အလုပ်ရှင် ie သငျ့သညျ။
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ကမီးမောင်းထိုးပြရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်အနေအထားများအတွက်လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးအရည်အချင်းများဖြည့်ဆည်းပါ။ သင်သည်အဘယ်မှာဒီအလုပ်ကြော်ငြာကိုရှာဖွေခဲ့ကြ ?. နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်, သငျ့သညျသတငျးအခကျြအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး ်ထမ်းရှာဖွေသူသို့မဟုတ် HR မန်နေဂျာသင်၏လျှောက်လွှာကိုလိုက်နာသင့်တယ်။ အဆိုပါစမတ်လမ်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာအီးမေးလ်ကစာတစ်စောင်ဖတ်နေဆက်လက်စာဖတ်သူကို (အလုပ်အမှုဆောင်ငှားရမ်း) ကိုမေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုဆက်သွယ်ရန်ကဘယ်လို, သင်အလားအလာအလုပ်ရှင်များအဘယ်သို့ပူဇော်နိုင်ပါတယ်.
မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာအောက်ပါအပိုဒ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်အလုပ်ရှင်ရဲ့နေရာလွတ်အဘို့သင့် application ကိုပေးပို့ခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထို့အပွငျကြောင်း may အချက်များဖြတ်လမ်းမျှဝေဖို့ကြိုးစားပါ သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုထောကျပံ့ကူညီ လက်ျာရွေးချယ်ရေးဘို့။
အလုပ်ရှာဖွေရေး Applications ကိုများနှင့်ကျောင်းသားများ
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ လတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရကျောင်းသားများကို။ ကျိန်းသေပညာရေးအတွေ့အကြုံနှင့်ဘယ်လိုသူတို့ရရန်ရှိသည်ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယင်း၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတာဝန်များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အခြိနျပိုငျးအလုပ်အကိုင်များကိုပူဇော်ဖြစ်ပါတယ် ?. ကြောင်းအားလုံးအသစ်ကလတ်ဆတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့သင့်တယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအတွက်သော့ချက်အချက်။ သူတို့ရဲ့၏ရလဒ်အဖြစ်အများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ သူတို့ရာထူးတိုးတယ်ဘယ်လိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အတွေ့အကြုံနှင့်လမ်းဖော်ပြထားခြင်းသငျ့သညျ။ သူတို့အခွအေနမြေိုးစီအလုပ်လျှောက်လွှာအီးမေးလ်က။ ကျိန်းသေသည့်ဖော်ပြထားခြင်းသင့်တယ် အတိတ်အလုပ်အကိုင်များခုနှစ်တွင်ပြီးစီးတာဝန်တွေသို့မဟုတ်စီမံကိန်းများကိုစိန်ခေါ်.
နောက်ဆုံးအပိုဒ်တစ်ကျေးဇူးတင်စရာလမ်းအတွက်စာတစ်စောင်ကိုအဆုံးသတ်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ်ထမ်းရှာဖွေသူသို့မဟုတ် HR မန်နေဂျာ သူတို့အလုပ်သူတို့လျှောက်လွှာစာလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချိန်ယူပြီးများအတွက်စာဖတ်သူမှကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်သင့်သည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီက template ကိုလုပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲထားပါတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, သင်ရေးဆွဲရန်ဒီလမ်းညွှန်လိုကျလြှောကျနိုငျ တစ်အနိုင်ရအလုပ်ရှာဖွေရေး လျှောက်လွှာ။ သငျသညျအလားအလာစုဆောင်းဖို့ဆုရှင်အက္ခရာရှိအောက်တွင်။ ဒါကြောင့်အောက်ကအဖုံးစာတစ်စောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR မန်နေဂျာများကဖန်ဆင်းသည်။ သေချာဘို့အခါ သင်ကသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလျှောက်လွှာအပေါ်ကိုသုံးပါ သငျသညျနေရာချထားဘို့အခွင့်အလမ်းကိုတိုးပွါးစေအီးမေးလ်ပို့။ ရိုးရှင်းစွာအရာတစ်ခုခုကိုစမ်းသပ်ပြီးလျှင်အလုပ်လုပ်သင့်တယ်လို့ပဲ။ အီးမေးလ်ကရှိသင့်အလုပ်လျှောက်လွှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များ.
ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေသူများအသုံးပြုခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းအမှုဆောင်အရာရှိကကျော်ပေးပို့ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကမှစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြ HR မန်နေဂျာထံမှတုံ့ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, သင်ပြီးပြည့်စုံသောအဖုံးစာတစ်စောင်ရှာနေလျှင်။ အောက်ကတဦးတည်းကိုအသုံးပြုဖို့နှင့်အဖြစ်မကြာမီသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်အလုပ်ရရန်ကြိုးစားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ပျော်ရွှင်ထက်ပိုပါလိမ့်မည် သငျသညျကိုအသုံးပြုပါလိမ့်မယ်နှငျ့သငျအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရရှိမည်ဆိုပါက။ အောက်တွင်သင် kob လျှောက်လွှာအီးမေးလ်ရှိခြင်းနေကြသည်။ အဘယ်သို့ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစာတစ်စောင်ရေးသားဖို့။
မိုဘိုင်း: + 44 (0) 745 399 0000
ငါ ........................ နှင့်ဒေသဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး Manager ကိုသကဲ့သို့ငါ၏ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံနှင့်အောင်မြင်သောတွင် track record ဖျောပွဖို့ရေးသားခြင်းဖြစ်၏။ ငါကသင်၏စစ်ဆင်ရေးမှတစ်ဦးအလွန်သိသာအလှူငွေစေရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှု, အရည်အချင်းများနှင့်အရေးပါသောအတှေ့အကွုံမြားအားအပိုင်ယုံကြည်ပါတယ်။
ကြှနျတေျာ့လက်ရှိအလုပ်ရှင်နှင့်အတူ ..................... ။ ငါဖောက်သည်အတွေ့အကြုံနှင့်အလားအလာရောင်းအားကိုသိရှိနိုင်ဖို့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်နားလည်စေသည်ဖြစ်သောအလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်ဈေးကွက်ထဲမှာ operating, စီးပွားရေး၏ 12 ဒေသများအတွက်တာဝန်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ, ငါနည်းပြအလုပ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ, သင်တန်းနှင့်ငါ့ကိုတစ်ပတ်ကိုအပို + 20k ပေးဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းနေဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာသည်။
ကျွန်မအလွန်စီးပွားဖြစ်လာဘ်နှင့်အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ဖြစ်၏။ သငျသညျငါမြင့်မားသောဝင်ငွေအဆင့်အထိရရှိရန်နှင့်စီးပွားရေးအတွက်ရှုံးနိမ့်ငွေသား minimalizing နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်ပို့ချခြင်းဖြင့် + 60% ကြီးထွားဖို့ -20% မှာရောင်းအားသိသိသာသာတိုးကယ်လွှတ်ကြပြီ, ငါ့လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍအတွက်, ငါ့ပူးတွဲ CV ကိုကနေမှတ်သားပါလိမ့်မယ်အဖြစ်။
ငါသည်လည်းအဖွင့်အတွက်ဆာခဲ့ခြင်းနှင့် 19 ကျော် ............ ............ ဖြတ်ပြီးသစ်ကို ............ .. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်းစည်းကြပါပြီ။ အောင်မြင်သောပါပြီနှင့်£ 12 မီတာစုစုပေါင်းရောင်းအားဝင်ငွေထိပ်ဆုံးကြပါပြီအားလုံးအရာ၏ယခင်အလုပ်ရှင်, အတူ။ အကြှနျုပျ၏ကျွမ်းကျင်မှုငါဖိအားအောက်မှာနှင့်ငါ့န်ထမ်းများ၏အခွက်တဆယ်ကိုတီထွင်, ငါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကျွမ်းကျင်မှုမြင့်မားတဲ့အဆင့်မြင့်နေစဉ်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်၏ဆိုလိုယင်းဧရိယာမန်နေဂျာအနေအထားတွင်သင်ယူခဲ့တယ်။
ဒီတော့ + 44 (0) 745 399 0000 ငါတို့သည် သာ. အတိမ်အနက်၌ငါ့ application ကိုဆှေးနှေးဖို့အင်တာဗျူးစီစဉ်နိုင်ပါတယ်ပေါ်မှာငါ့ကိုဖုန်းဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်ကြဘူးပါ။
်ထမ်းရှာဖွေသူသို့မဟုတ် HR မန်နေဂျာ၏အမည်ကိုဖော်ပြပါ။
ယောဘသည်လျှောက်လွှာကို double check လုပ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျခကျြခငျြးအင်တာဗျူးပြီးနောက် start နိုငျသော note ကိုရယူပါ။
အကြိမ်ပေါင်းများစွာ၏ CV ကို Check, တစ်ဦးကိုသုံးပါ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက် Grammarly plugin ကို အမှားသေချာကအခမဲ့စေရန်။
အိုကေ, သေချာအောင် သင်အမြဲအကြံပေးပါလိမ့်မည် အလုပ်ခေါင်းစဉ်များနှင့်အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုကိုစောင့်ရှောက်ရန် updated ။ အခါတိုင်းသင်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုရေးပါ။ သင့်အနေဖြင့်အလုပ်ရှင်များ၏လက်ခံရရှိသူ၏အမည်ကိုဖော်ပြထားခြင်းသငျ့သညျ။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုအလုပ်လျှောက်လွှာတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့ပေးရန်ကြိုးစား အီးမေးလ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအရမ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုပေးပို့ခြင်းဘူးသူကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ နာမည်တစ်ခုဖော်ပြထားခြင်းဖို့ကြိုးစားပါနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအမည်သစ်ကိုရသောလျှင်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျကိုတောင်၏အမည်ကိုသိစေခြင်းငှါ ်ထမ်းရှာဖွေသူ။ ဒါကြောင့်ပင်အလုပ်ကြော်ငြာကနေအားလုံးအသေးစိတ်ကိုဖော်ပြထားခြင်းကြိုးစားပါ။ အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာမည် LinkedIn အပေါ်ကုမ္ပဏီ ထိုသို့ပြုမိရ။
ကိုသတိရပါ, ဘယ်တော့မှအစဉ်အဆက်သင်၏အကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏မိတ္တူဖန်တီးပါ။ အဆိုပါငှားရမ်းမန်နေဂျာတစ်ဦးလျှောက်လွှာအက္ခရာအဖြစ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည် LinkedIn အပေါ်ပြန်လည်စတင်, အပိုဆောင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အများဆုံးကျည်ဆံအချက်များ add ကြပါဘူး။ အမြဲတမ်းကိုတစ်ဦးအလွန်လုံခြုံလမ်းထဲမှာစောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပါစေ။ အများစုမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှုဆောင်အရာရှိ ရိုးရှင်းပေမယ့်အလွန်သိကောင်းစရာများပေး။ သေချာသင့်လျှောက်လွှာအီးမေးလ်ကစာတစ်စောင်အတွက်သော့ချက်မှတ်၏ပျေါလှငျကောင်းမကောင်းကိုဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူကိုကြည့်ပြုလုပ်ခြင်း။ သေချာများအတွက် add မဟုတ် တစ်ခုလုံးကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များ။ ဒါက CV ကိုတှငျဖျောပွထားရမည်ဖြစ်သည်။
အဓိကအရာပထမဦးဆုံးအစှဲထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငှားရမ်းမန်နေဂျာများအတွက် နောက်ဆုံးစှဲဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတစ်ဦးကိုအလုပ်လျှောက်လွှာစာဆင်ခြင်၏။ သင်မဖွင့်လိုင်းများနှင့်အတူကျည်ဆန်အချက်များကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အမြဲတမ်းလည်းအရေးပါသည်ဟုပိတ်ပွဲလိုင်းများ၏ခွန်အားကြိုးစားကြ HR မန်နေဂျာများအဘို့။ အဆုံး၌, အလုပ်ရှင်များအနာဂတ်သမ္မတလောင်းကိုရှာဖွေနိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။ သင်တို့ရှိသမျှသည်အရပျ၌ရှိသည့်အခါထိုအသင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဓိကအာရုံစိုက်လွန်းဖြစ်ပါတယ် HR မန်နေဂျာသို့မဟုတ်အလားအလာထမ်းရှာဖွေသူလာအောင်။ ကိုယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် application ကိုစာတစ်စောင်ဆန်ခါတင်စာရင်းနှင့်အလားအလာရှိသောကုမ္ပဏီမှကျော်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီအစားအမှိုက်မေးလ်ပေါ်မှာပေးပို့ခြင်း၏။
နှုတ်ကပတ်တော်၌သို့မဟုတ် DOC format နဲ့သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
လူကြီးမင်း၏ CV ကိုအမြဲစကားလုံးသို့မဟုတ် DOC အတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှာဖွေနေသူမဘုံအမှားအလုပ်အကိုင်များတစ်ဦးကို PDF ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့ငှားရမ်းမန်နေဂျာကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ယူဆကြပါစို့။ အနည်းငယ်သာအသေးစိတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုပါသည်။ သူ့ကို PDF ဖိုင်ရယူရန်ထဲမှာကျော်ကစီမံခန့်ခွဲရန်အဘို့အသေချာဘို့ကခဲယဉ်းပါလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းစံစကားလုံးပုံစံများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျပင်ရှိနိုင်ပါသည် LinkedIn အဘို့ Microsoft ကလမ်းကိုကြည့်။ ဒါဟာရှာဖွေစုဆောင်းကိုကူညီမယ့်စူပါမတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကူညီလိုလျှင်သူတို့အားအဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း ?. သူတို့လုပ်လိမ့်မယ် ပွဲချင်းပြီးပေါ်တွင်သင်ငှားရမ်း!.
အဆိုပါ LinkedIn တင်ဆက်မှုအရေးကြီးပါတယ်
အဆိုပါအဘယ်သူအားမျှ အလုပ်ရှင်နှင့်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ တစ်ခုဆီလျှော်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားသည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရန်ဖြစ်ပါသည် CV ကိုများအတွက် LinkedIn ကိုသုံးပါ။ ထို့ကြောင့်, ဒီစနစ်နှင့်အတူ။ သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုစာတစ်စောင်၏အရှည်ကိုတိုးမြှင့်ကြဘူးပါလိမ့်မယ်။ မန်နေဂျာများငှားရမ်းအခြားသူများနှင့်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအတည်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မည် ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ။ LinkedIn အပေါ်အချက်အလက်များ၏အပိုင်းပိုင်းအများစုဟာ။ ကျိန်းသေပြုမှသာအသေးစိတျရှိသင့် အင်တာဗျူးခေါ်ဆိုခအဘို့သင့်ရွေးချယ်ရေးကိုထောကျပံ့.
သငျသညျ LinkedIn ပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုရေးသားတဲ့အခါ။ အကျဉ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်ရာအချက်များမှကပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဘတ်စကက်ဘောကျောင်းများအဖြစ်အချို့သောဆီလျှော်အသေးစိတ်ကိုထားဘယ်တော့မှမ သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုအဘို့။ နှင့်သင့်ကလေးသို့မဟုတ်ခွေးနှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်ထားပါဘူး။ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်လူမှုမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦးကရှုပ်ထွေးပရိုဖိုင်းကိုတစ်ဦးထံမှ Z. ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်လျှောက်လွှာစာကိုမကူညီကြလိမ့်မည် ဒူဘိုင်းအတွက်အောင်မြင်မှုရရန်.
ရန်တစ်ခုတည်းသောအဓိကအလှည့်လမ်း အလုပ်ရှင်များအဘို့အအပြုသဘောဘက်။ က LinkedIn နှင့်အတူသင်၏ CV ကိုဖွဲ့စည်းထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်, သူတို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြည့်ရှု, သင်၏အတှေ့အကွုံအကြားသင့်လျော်သောအာကာသစွန့်ခွာရန်။ ဒါကြောင့်မည်သည့် typing error တစ်ခုသို့မဟုတ်သဒ္ဒါအမှားအခမဲ့သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ယင်းကြောင့်, မန်နေဂျာများငှားရမ်း ကြောင်းမှာရှာကြ၏။
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတိုတောင်းသောကြောင့်စီမံခန့်ခွဲသောအဆုံးမှအဆုံးသို့ရောက်ကြ၏။ အမြဲ တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်။ သင့်ရဲ့ LinkedIn သေချာပါစေနှင့်အတူတူပင်အကြောင်းအရာရှိခြင်းပြန်လည်စတင်မည်။ သိမ်းဆည်းထားပါ သာညာဘက်သတင်းအချက်အလက်များ သင့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာအီးမေးလ်ကသို့အချို့သောဆီလျှော်အတွေ့အကြုံကိုနေရာဘယ်တော့မှမ။ အမြဲတမ်းသင်နှင့်လျှောက်ထားနေသောကုမ္ပဏီမှသာရန်သင့်အီးမေးလ်ပေးပို့ထမ်းရှာဖွေသူ name ကို add အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက် သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှု။ ကြောင်းကျိန်းသေသင့်အားလုံး သင်သည်သင်၏အိပ်မက်အလုပ်ရကူညီပေးရန်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကနေ, ကသင်လိုအပ်သမျှသောသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖုံးအက္ခရာကိုသုံးပါ, ငါတို့ကဝင်သည်မည်မျှသိစေပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲရှိပါတယ် အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီဖို့ကြိုးစားနေ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခုဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။